LEGO 71031 ဆိုတာဘယ်သူလဲ Marvel စတူဒီယိုရဲ့ Captain Cartပုံသေးလား။
26 / 08 / 2021 27 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 334 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Captain America, Captain America: The First Avenger, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, သေးသေးလေး, Peggy ကို Carter, အနီရောင် ဦး ခေါင်းခွံ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါ LEGO Group, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
အခြား superhero timeline တစ်ခုမှ minifigures ငါးခုတွင်ပထမဆုံးဆွဲထုတ်သည်။ Lego 71031 Marvel စတူဒီယိုဗိုလ်ကြီး Carter သည်ပထမ Avenger ၏နောက်ခံသမိုင်းကိုပြန်လည်စဉ်းစားသည်။
နောက်ဆုံးအသုတ်၌စာလုံးခုနစ်လုံးရှိနေစဉ် စုဆောင်းထားသောအသေးစား ကနေဆွဲထုတ် Disney+ လက်ရှိပြသထားသောပြပွဲများ Marvel Cinematic Universe timeline ('Sacred Timeline'၊ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်)၊ ကျန်အားလုံးသည် What If ... ? မှလှုံ့ဆော်သောကာတွန်းစီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲကိုပွဲ ဦး ထွက်ပြခဲ့သည် Disneyဒီလအစောပိုင်းမှာထုတ်လွှင့်တဲ့ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီးဒီစီးရီးတွေက T'Challa Star-Lord နဲ့ Captain C ရဲ့အရသာကိုအခုထိပေးခဲ့တယ်။arter အဆုံးစွန်သည်တစ်ဒါဇင်လုံး၌အသေးငယ်ဆုံးနှင့်အထင်ကြီးဆုံး minifigures တစ်ခုဖြစ်သည် 71031 Marvel စတူဒီယို -ဒါပေမယ့်မင်းက What If ကိုအမီလိုက်ဖို့လိုသေးရင် Captain America ဖြစ်ပေမယ့်မဟုတ်တာကမင်းအတွက်တော်တော်လေးဂြိုလ်သားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Peggy C ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲartSteve Rogers အစား super-soldier serum ကို er ပေးခဲ့သလား။ အဖြေ၊ မင်းကိုပြောဖို့ spoiler မရှိတာက Captain C ပါarter ဒါပေမယ့်သူမဟာ Captain America: The First Avenger - Captain C မှာ Steve ကဲ့သို့ Red Skull ကိုဖြုတ်ချဖို့လိုနေချိန်ဖြစ်သည်arter သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူဝါဒီပုံစံများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဖြေရှင်းရန်လိုသည်၊ ၎င်းမှာပထမတော့သူမအားလုံး ၀ တိုက်ပွဲ ၀ င်ရန်တားဆီးခဲ့သည်။
ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာ Captain C ကိုမြင်တယ်artသူသည်အသစ်တွေ့ရှိသောကျွမ်းကျင်မှုကို Red Skull နှင့် Hulkbuster ပုံစံသံချပ်ကာဝတ်စုံနှင့် Steve Rogers တို့နှင့်အတူတကွရှိနေခြင်းကိုစမ်းသပ်ရန်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ထိုသဘောတရားအတွက်အခြေခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomperငါတို့ကိုငါတို့ရဲ့ပထမဆုံး Captain C ခေါ်ခဲ့တာarter minifigure, ဒါပေမယ့် in one 71031 Marvel စတူဒီယို ပိုဝေးတဲ့ဒီဇိုင်းကပိုကောင်းတယ်။
၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် Lego အဖွဲ့က၎င်းအားစဉ်းစားသည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား 'အပိုင်းအစလေးများ art''ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အားဘတ်ဂျက်နှင့်အဓိကအားအသေးစိတ်ထက်ပိုပေးနိုင်သည် Lego Marvel theme အတွက်ခွင့်ပြုသည်။ ရလဒ်သည်လုံး ၀ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပုံသွင်းထားသောခြေထောက်များနှင့်အသစ်စက်စက်ဆံပင်ပုံစံအသစ်တို့ဖြင့်သိသာထင်ရှားလှသောပုံဖော်မှုဖြစ်သည်။
သူမကိုသေတ္တာထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ် 71031 Marvel စတူဒီယို နောက်လတွင်စင်ပေါ်သို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏လတ်ဆတ်။ မဖွင့်ရသေးသောသေတ္တာများနေရာတွင်အတိအကျမြင်နိုင်သည် ဖြန့်ဝေလမ်းညွှန်မရ။ Captain C အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကarter နှင့်ပထမစာလုံး ၁၁ လုံးပါ ၀ င်သည် Marvel CMF စီးရီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ဆေးပါ အစောပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်များအတွက်အောက်ပါ link များကိုနှိပ်ပါ 71031 Marvel စတူဒီယို ယခုအချိန်ထိဇာတ်ကောင်စရိုက်အချက်အလတ်များ
← Lego Star Wars: The Skywalker Saga dev ကဂိမ်းရဲ့စက်ပြင်အသစ်တွေကိုရှင်းပြတယ်
LEGO စက်ဘီးလမ်းများကိုဒတ်ခ်ျစက်ဘီးစီးအဖွဲ့ကဝေဖန်ခဲ့သည် →